အေးခဲနေသော အပျက်အစီးပုံအောက်တွင် ၃၆ နာရီနီးပါး ပိတ်မိနေခဲ့သော ရုရှားကလေးငယ်ကို ကယ်တင်နို?? - Yangon Media Group
အေးခဲနေသော အပျက်အစီးပုံအောက်တွင် ၃၆ နာရီနီးပါး ပိတ်မိနေခဲ့သော ရုရှားကလေးငယ်ကို ကယ်တင်နို??
မော်စကို၊ ဇန်နဝါရီ ၂
အေးခဲနေသော ရာသီဥတု အခြေအနေအောက်တွင် ရုရှားကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားများသည် ပြိုကျနေသော တိုက်အဆောက်အအုံအပျက်အစီးပုံထဲ၌ ပိတ်မိ နေသော ကလေးငယ်တစ်ဦးကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်တွင် အပျက်အစီးပုံကြားထဲ၌ ၃၆ နာရီ နီးပါးပိတ်မိနေခဲ့သည့် အဆိုပါကလေးငယ်ကို ကယ်တင်နိုင် ခဲ့ပြီး ဖခင်ဖြစ်သူက နှစ်သစ်ကူးကာလ၌ ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်ဟု ခေါ်ဆိုခဲ့သည်။
မက်နစ်တိုဂိုဆက်စ်မြို့မှ ယင်းအဆောက်အအုံသည် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက် နံနက်အရုဏ်တက် ချိန်တွင်ပြိုကျခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အနည်းဆုံးကိုးဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းအဆောက်အအုံအတွင်း နေထိုင်သည့် လူ ၃၂ ဦးကိုလည်းရှာဖွေရာ မတွေ့ရှိသေးကြောင်း တာဝန်ရှိသူများက ပြောကြားခဲ့သည်။ ဓာတ်ငွေ့ယိုစိမ့်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်ဟု ယူဆရသော ယင်းပေါက်ကွဲမှုပြီးနောက် ယင်းအဆောက်အအုံမှာ ပြိုကျခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အသက်(၁၁)နှစ်အရွယ် အီဗန်ဖော်ကင်ဟုအမည်ရှိ ယောက်ျားလေးတစ်ဦးမှာ စိုးရိမ်ရသော အခြေအနေတွင်ရှိနေကြောင်း တာဝန်ရှိသူများက ပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါကလေးငယ်မှာ ဦးခေါင်းတွင်ဒဏ်ရာရရှိထားပြီး ရေခဲမှတ်အောက် အနုတ်ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၂ဝတွင် နေထိုင်ခဲ့ရသည့်အတွက် ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကျဆင်းသည့်ဝေဒနာနှင့် နှင်းကိုက်သည့်ဝေဒနာများကို ခံစားနေရ ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါကလေးငယ်ကို အသက်ကယ်တင်နိုင်ရန် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက် နှောင်းပိုင်းတွင် မော်စကို မြို့သို့ လေယာဉ်ဖြင့်ပို့ဆောင်ခဲ့သည်။ မော်စကိုမြို့သို့ရောက်ချိန်တွင် တည်ငြိမ်သောအခြေအနေတွင်ရှိကြောင်း အမျိုးသားပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအင်စတီကျုမှ ဗလာဒီမာအူဘာက ပြောဆိုထားသည်။ အဆောက်အအုံပြိုကျခဲ့ကြောင်း ဇနီးဖြစ်သူ ဖုန်းဆက်လာချိန်တွင် ဖခင်မှာအလုပ်တွင်ရှိနေခဲ့ပြီး မိခင်မှာ အသက်သုံးနှစ်အရွယ်သားတစ် ဦးနှင့်အတူအပျက်အစီးပုံထဲမှ လွတ်မြောက်ခဲ့သည်။
ဒဏ်ရာ ကင်းရှင်းမည် ဆိုပါက ပိုင်ဆိုင်သမျှကို စွန့်လွှတ်ရန် ဒေါ့မွန်အသင်း တိုက်စစ်မှူး မာကို??
ဆင်းရဲသားများ သက်သာချောင်ချိရေးအတွက် ထိုင်းအစိုးရက ကူညီထောက်ပံ့မှုများပေးမည်